"Annagu Ma Degdegsanayno Aqoonsiga Caalamiga Ah, Haddana Annaga Oo Og Muhiimadda Uu Leeyahay, Waanuse U Dadaalaynaa"
Wednesday 18th April 2018 10:24:36 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(GGN)-Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi cabdi, ayaa ku dooday inay Somaliland xidhiidhada ay dunida la yeelanayso ku salayso danaheeda oo ay eegto hareeraheeda dabadeedna xulato jidka ugu fiican.
Madaxweyne Biixi oo u waramay wargeyska Al-Bayaan ee Imaaraadka Carabta ka soo baxa wuxuu ku yidhi, "Xidhiidhadayada arrimaha dibadda waxa aanu u eegnaa danta dadkayaga uun. Hareerahayaga ayaa aanu eegnaa, waayo aragnimada dawladaha, markaasaanu ka doorannaa ta ugu fiican si aanu u soo qaadanno. Waxa aanu nahay dawlad soo koraysa, waxa aanu isku dayeynaa, in aanu samayno jidkii ay muwaadiniintayadu barwaaqo ku gaadhi lahaayeen.”
Mudane Biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas ku daray, "Annagu ma degdegsanayno aqoonsiga caalamiga ah, haddana annaga oo og muhiimadda uu leeyahay. Waanu u dadaalaynaa, dhammaan xukuumadihii kala dambeeyey ee Somaliland, waxa ay ka soo shaqaynayeen sidii loo gaadhi lahaa aqoonsi, laakiin sida oo kalana waxa aanu ku hawlannahay kor-u-kaca dalkayaga, iyo horumarinta nidaamkiisa maamul iyo maaliyadeed, si aanu u xoojinno dhaqaalaha, una rumayno badhaadhaha muwaadiniinta.”
Madaxweynaha oo hadalkiisa wataa wuxuu yidhi "Aqoonsigu waa muhiim, laakiin asal ahaan waa jid lagu gaadho rumaynta in muwaadiniintu badhaadhe ku noolaadaan. Sidaa awgeed laba jid ayaa aanu is barbar wadaynaa, xidhiidho diblumaasiyadeed iyo siyaasaddii aanu xidhiidhadaa ku gaadhi lahayn oo jid ah, iyo ka kale oo ah, in aanu xidhiidho dhaqaale oo xoog badan la yeelanno dawladaha nala shaqaynaya ee fahamsan qadiyaddayada.”
Suldaan Murrashaxiinta Doorashada Soomaaliland Ugu Baaqay Inay Wanaaga Ka Taliyaan Iyo Danta Guud Ee Qaranku Wada Leeyahay
Sii Akhri Sep 13th 2017
''WADDANI Waxaan leeyahay Odayga aan Wada ilaashano , Garan maayo waxaad u habaaraysaan''[ Murrashax Muuse Biixi]
Sii Akhri Jul 08th 2017
"Hadda Waxa Laga Jooga Wakhtigii Ay Somaliland ......Wasiir Sacad Oo Beesha Caalamka Ugu Baaqay Inaanay Somaliland Kala Masuugin Aqoonsiga -
Sii Akhri Jun 27th 2017
[NEWS HOUR] Khasaaraha Dabkii Ka Qarxay Dekadda Dekadda Caalamiga ah Ee Berbera Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay Xaaladdu Meesha Ay Marayso
Sii Akhri Jun 18th 2017